ShweMinThar: August 2017
Posted by Alex Aung at 12:20 PM No comments:
ဒိန်​ချဉ်​ - ငှက်ပျောပေါင်း - နှမ်းအနက်ကပ် မုန့်ကြော် - Guacamole
ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်နည်းအတွက် ဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်နှင့် နွားနို့ ပဲလိုပေမယ့် ပြုလုပ်နည်းကို နည်းလမ်းလမ်းမှန်မှန်လုပ်ရန်ပဲလိုပါတယ်။ နည်းလမ်းသိရင်လဲ မခက်ပဲ လွယ်ကူတဲ့နည်းဖြစ်သွားပြီး ခဏခဏလုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ( ၆-၇ ပွဲစာ)
၁။ နွားနို့ - ၁ လီတာ
၂။ ဒိန်ချဉ် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းမောက်မောက်
၁။ ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်ရန်ထည့်မည့်ဗူး (အဖုံးပါသော)က အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဆီပါနေတာတို့ ညစ်ပတ်နေတာတို့ ဖြစ်နေရင်မကောင်းပါ။ ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်မည့်ဗူးကို သေချာဆေးပြီး ရေခြောက်အောင်လုပ်ထားပါ။ နောက်တခုအရေးကြီးတာကတော့ ဒိန်ချဉ်ခဲဖြစ်အောင်ထားမည့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်ရန်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ဒိန်ချဉ်ဗူးကို ရွှေ့ တာလှုပ်တာ ကိုင်ကြည့်တာတို့ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲ့လိုလုပ်မည့်ရင်မခဲတော့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တချက်က အခန်းရဲ့ အပူဆုံးနေရာမှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။
၂။ နွားနို့ ကို ပွက်အောက်တည်ပြီး ခပ်နွေးနွေးအနေအထားရောက်အောင်အထိ အအေးခံထားပါ။
၃။ ခပ်နွေးနွေးအနေအထားရောက်ရင် ဒိန်ချဉ်ကိုထည့်ပြီး ဒိန်ချဉ်များပျော်သွားပြီး နွားနို့ နဲ့ တသားထဲဖြစ်သွားအောင် ကြက်ဥခလောက်တံဖြင့် ခလောက်ပါ။
၄။ ထို့ နောက် ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်မည့် ဗူးထဲကိုထည့် အဖုံးဖြင့်လေလုံအောင်ပိတ်ပြီး အခန်းရဲ့ ပူနွေးတဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ ဒိန်ချဉ်ခဲ မြန်မြန်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်မည့်ဗူးကိုအဝတ်ပါပတ်ထားပါ။ နွေရာသီလိုမျိုး ပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ ၁၂ နာရီလောက်ထားရုံနဲ့ ဒိန်ချဉ်ခဲကိုရပါတယ်။ မိုးရာသီ တို့ ဆောင်းရာသီတို့ ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၁ ရက်တော့ ထားဖို့ လိုပါတယ်။ (အိစံတို့ ဆီကတော့ အေးလို့ ၁ ရက်ခွဲ ထားပါတယ်။) အဲ့လိုဒိန်ချဉ်ခဲဖြစ်ဖို့ ထားတုံးအချိန်မှာ ဒိန်ချဉ်ဗူးကို ရွှေ့ တာတို့ လှုပ်တာတို့ ကိုင်ကြည့်လိုက်တာတို့ မလုပ်ပါနဲ့ ။ အဲ့လိုလုပ်ရင် ဒိန်ချဉ်ခဲမဖြစ်တတ်ပါ။
၅။ ရလာတဲ့ ဒိန်ချဉ်ကို ထန်းလျက်ရည်(သို့ ) သကြား (သို့ ) ပျားရည် တို့ ဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။ ဒိန်ချဉ်ကို နောက်ရက်တွေမှ စားမည်ဆိုလျှင် ရေခဲသေတ္တာအအေးခန်းထဲမှာ ၃ ပတ်လောက်သိမ်းထားပြီး စားနိုင်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်းမပါဘဲ ငှက်ပျောသီးသက်သက်သာ ပေါင်းစားချင်ရင်တော့ ဒီလိုလေး လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ဖက်နံ့တသင်းသင်းနဲ့ ငှက်ပျောပေါင်း ချိုဆိမ့်အရသာနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ အင်မတန်မှ လိုက်ဖက်ပါ တယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ငှက်ပျောထုပ် ၆ ထုပ်စာ)
- သကြား - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
- ဂျုံ - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
- အုန်းနို့ - ၃ ဇွန်း
- အုန်းသီးဖတ် - အနည်းငယ်
- သီးမွှေးငှက်ပျောသီး (အသေး) - ၇ လုံး
- ဝါးရွက် - အနည်းငယ်
၁။ ဝါးရွက်များကို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူနှင့် အရင်စိမ်ထားပါ။
၂။ ငှက်ပျောသီးကို သကြားနှင့်ရောပြီး ခြေပါတယ်။ ဂျုံ၊ အုန်းနို့၊ အုန်းသီး ဖတ်များနှင့် ဆားနည်းနည်း ထည့်နယ်ပါ။ အချိုကြိုက်လျှင် သကြား ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ဝါးရွက်ထဲ စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်းခွဲခန့်ထည့်ကာ လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပြီး ကြိုးစည်းပေးပါ။
၄။ Philip Multi Cooker က Steam Option ကို ရွေးပြီး ပေါင်းတဲ့ ဗန်းလေးပေါ်မှာတင်ကာ မိနစ် ၁၀ ပေါင်းပါ။ လုံးဝအေးမှ သုံးဆောင်ပါ။
နှမ်းအနက်က ကျန်းမာရေးအတွက် အင်မတန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီမုန့်ရဲ့အရသာလေးက တစ်မျိုးထူးခြားတာကြောင့် အားလုံးအတွက် ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
- နှမ်းအနက် - စားပွဲဇွန်း ၈ ဇွန်း
- ကြော်ရန်ဆီ - လိုသလောက်
- ကောက်ညှင်းဆန်မှုန့် - ၂ ခွက်
- ဆန်ကြမ်းမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
- ရေ - ၂ ခွက် - ၂ ခွက်ခွဲ (လိုသလောက် )
- ဆား - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
- ငှက်ပျောသီး - ၁ လုံး
- ထန်းလျက်ရည် - လိုသလောက်
၁။ ဖန်ပန်းကန်လုံးအကြီးထဲ အုပ်စု (က) ပစ္စည်းများ အားလုံးထည့်နယ်ပါ။ ရေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုသလောက် လောင်းထည့်ပေးပါ။ မုန့်အနှစ်များစေးပြီး လက်မှာမကပ်လျှင် ရပါပြီ။
၂။ ဇောက်နက်သောအိုးဖြင့် ဆီပူအောင် တည်ထားပါ။
၃။ မုန့်နှစ်များကို လိုသလို အနေတော် အလုံးလေးတွေ လုံးပြီး ပြန်ပြားပါ။ ပြီးလျှင် နှမ်းအနက်ထဲ မုန့်နှစ် ပြားကိုဖိပြီး အနှမ်းအနက် ကပ်ပေးပါ။ နှစ်ဖက်စလုံး အညီကပ်ပြီးလျှင် ဆီသုတ်ထားသော ဗန်းပေါ် သေချာ တင်ထားပါ။
၄။ ဆီအိုးထဲ တစ်ခုချင်းစီထည့်ပါ။ အိုးကျပ်အောင် မထည့်ပါနှင့်။ ရွှေရောင်သန်းလာလျှင် တစ်ဖက်လှန်ပေးပါ။ ကြွပ်ရွပြီး ရွှေရောင်သန်းလာလျှင်ရပါပြီ။
မက္ကဆီကန်အစားအစာ ဂွာကာမိုးလီလို့ခေါ်တဲ့ ထောပတ်သီးထောင်းလေးပါရှင်။ ဆိမ့်လှတဲ့ ထောပတ်သီး အရသာထဲကို ဆား၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ သံပရာသီးပေါင်းထည့်ပေးပြီး တခြားမွှေးတဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ နံနံပင်တို့နဲ့ ရောနယ်လိုက်တဲ့အခါ အလွန် စားကောင်းတဲ့ Dipping Sauce လေး ဖြစ်လာတယ်။ တော်တီလြွာကပ်ြွကပ်လေးနဲ့ တို့စားလို့ကောင်းသလိုတာကို၊ ဖာဟီတာတို့နဲ့လည်း တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းက အသားထူပြီး စပ်တဲ့ ဟာလပီညောကို သုံးသင့်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးကလည်း ပျော့အိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မပျော့မမာ အနေအထားမျိုးကို အသုံးပြုပါ။ မြန်မာမှာ ထောပတ်သီးတွေက အမည်းရောင် အမျှင်တွေ ပါနေတတ်တယ်။ အဲဒါလေးတွေက လေဝင်ပြီး အောက်စီဒိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။ ထောပတ်သီးဝယ်တဲ့အခါ အညှာပိတ်လေးကို ရွေးပြီးဝယ်ပါ။ ထောပတ်သီး အနု၊ အစိမ်း၊ အမှည့်ကို စမ်းသပ်တဲ့အခါ လက်ညှိုးနဲ့ ဖိကြည့်တာထက် လက်ဖဝါး ထဲထည့်ပြီး အသာအယာညှစ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်တော့အသုံးပြုမလဲဆိုတာမှာ မူတည်ပြီး အပျော့အမာ၊ အခွံအရောင် အစိမ်း/ အမည်း ရွေးပြီးဝယ်ပါ။ သံပရာရည်က ချက်ချင်းမမည်းအောင် အကာအကွယ်ပေးပေမယ့်လည်း ဂွာကာမိုးလီကို စားခါနီး နာရီဝက်ထက် ကြိုတင်ပြီး မလုပ်သင့်ပါ။
- ထောပတ်သီး - ၁ လုံး
- ကြက်သွန်နီ - ၁ ခြမ်း
- နံနံပင် - ၁ ခက်
- ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁ တောင့်
- သံပရာရည် - သင့်ရုံ
- ခရမ်းချဉ်သီး - ၁ ခြမ်း
၁။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို လေးထောင့်အတုံးလေးများ လှီးထားပါ။
၂။ နံနံပင်ကို မထူမပါးလှီးထားပါ။
၃။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်း၊ အစေ့ထုတ်ပြီး လေးထောင့်အတုံးလေးများ လှီးထားပါ။
၄။ ကြက်သွန်နီကို ထက်ခြမ်းခြမ်း၊ ရေဆေး၊ လေးထောင့် အတုံးသေးသေး လှီးထားပါ။
၅။ ထောပတ်သီးကို အခွံနွှာ၊ အသားကို ဇွန်းနှင့် ခြစ်ပြီး ခပ်ယူပါ။ ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ပါ။
၆။ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ နံနံပင်မှလွဲ၍ လှီးထားတာတွေ အကုန်ထည့်ပါ။ ဆား၊ သံပရာရည်ထည့်ပြီး ဖွဖွလေး ကျည်ပွေ့နှင့် ဖိကြိတ်ပေးပါ၊ အရသာကို မိမိနှစ်သက်ရာ အချဉ်၊ အစပ်လိုသလို ပြုပြင်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ နံနံပင်ထည့်ပြီး ဇွန်းနှင့် သမအောင် ဖွဖွမွှေပါ။ ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီး ဂျုံအကြွပ်ကြော်နဲ့ တို့စားနိုင်ပါပြီ။
Cho Hee-pal ( ဂျို ဟီး ဖားလ် ) သို့မဟုတ် ပိရမစ် ရိုက်စား စီးပွားရေးစနစ် (pyramid scheme) အသစ်ထွင်သူ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ဝမ် ကုဋ္ဋေပေါင်း သိန်း၄၀၀ကျော် ( ဒေါ်လာ 3.5 billion )ချမ်းသာသော ကုဋ္ဋေကြွယ် သူဌေးကြီးတယောက်အကြောင်း။
"သား အမေစိတ်မကောင်းပါဘူး။ သားကို အလယ်တန်းကျောင်းပို့ဖို့ အမေ့မှာငွေမရှိဘူး"
သူသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားသူဖြစ်သည်။သူ၏ အမည်မှာ Cho Hee-pal ( ဂျို ဟီး ဖားလ် ) ဖြစ်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ်သည် မူလတန်းကျောင်းအပြီးတွင် ကြုံရာ ကျဘန်းအလုပ်များဝင်လုပ်ရလေသည်။
အသက် ၂၀ တွင် မွေးရပ်မြေဖြစ်သော ယောင်ချွန်း (Gyeongsangbuk-do/Yeongcheon City) မှ အလုပ်လုပ်ရန် မိဘအိမ်မှ စွန့်ခွာသွားတော့သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သည် အကိုနှင့် ခဏတာအတူရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။
ငိုသံကြီးကြောင့် ဂျို ဟီး ဖားလ် အိမ်ရှေ့ထွက်ကြည့်မိသည်။ မိန်းမကြီး ၃ ယောက် သူတို့ကလေးများနှင့်အတူ..။
"မင်းအကိုဘယ်မှာလဲပြောပြပါကွယ်..။ အဒေါ်တို့ ဘဝပျက် နေလို့ကူညီပါ တူမောင်ရယ်.."
အဒေါ်ကြီးက လက်အုပ်ချီ၍ ငိုယိုတောင်းပန်ကာ သူ့အကိုရှိမည့်နေရာကိုမေးကြသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ အကိုအား လူများကတရားစွဲရန် သူတို့နေသောအိမ်သို့ လာရှာကြနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်(၂၀၀၀ ခုနှစ်) သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ လူလိမ် စီးပွားရေးသမားတို့၏ ပိရမစ် စီးပွားရေး ရိုက်စားခွင်( pyramid scheme ) ဟုအမည်ရသော ငွေလိမ်မှုတို့ကြောင့် ဘဝပျက်သူများ ဒုနဲ့ဒေးရှိလာသည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လူလိမ်တို့၏ ပိရမစ် စီးပွါးရေး ရိုက်စားခွင် ၏ လှည့်ကွက်တို့ကိုရှောင်ရန် တောင်ကိုးရီးယား TV အစီအစဉ်တို့မှ ပညာပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူတော်တော်များများက သိကြကာ လူလိမ်များကိုဖော်ထုတ်နိုုင်ကြသောအချိန်လည်းဖြစ်လေသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ အကိုသည် ထိုကဲ့သို့ သက်ဆိုးမရှည်ခဲ့သော ပိရမစ်လူလိမ်များထဲမှ တယောက်ဖြစ်သည်။
"အကိုက အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေလိမ်တယ်ဗျာ....လူတွေ ဒီထက်ပို စိတ်ဆိုးသင့်တယ်။ ကျနော်တောင်စိတ်ဆိုးတယ်"
ထိုနေ့မှစ၍ ဂျို ဟီး ဖားလ် တစ်ယောက် ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားတော့သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သူ့အကိုထံ ခဏ ပြန် လာလည်သည်။
အသက် ၄၇ နှစ်။
" အခုတော့ ကျွန်တော် သိပြီ။ လူတွေကို ကူညီရမယ်။ အကို သူများကို ဘယ်တော့မှထပ်မလိမ်ပါနဲ့။ ဘုရားသခင်က လူတွေကိုကူညီဖို့ ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်လိုက်တာ..."
သူသည် အတော်ချမ်းသာနေသည်။ စတိုင်ကျကျ လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေသည်။ ကားအကောင်းစားကြီးကို စီးနေသော်လည်း မာန်မာနမရှိ။ စိတ်ထားအလွန်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီး သမာသမတ်ရှိသည်။
သူ့အကိုနှင့် မိသားစုသည် သူ၏ပြောင်းလဲမှုအတွက် အံ့သြနေကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် သူ့အကိုမိသားစုသည်လည်း ပြန်လည်ကြိုးစား၍ အတော် အသင့်ချမ်းသာနေချိန်လည်းဖြစ်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သည် BMC ဟူသော ပင်မ ကုမ္ပဏီတခုကို ထောင်ရန် စီးပွားရေး ရှယ်ယာဝင်များကို ခေါ်လိုက်သည်။
"ကျွန်တော် နှစ်တိုတို အတွင်းမှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ချမ်းသာနေပြီ ပိုက်ဆံမလိုတော့ဘူးဗျ... "
"အခု ခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့တာ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်ဘယ်လိုချမ်းသာလာလဲ ပြောပြချင်တယ်...။ "
" ကျွန်တော်ချမ်းသာလာချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာလိုအပ်ချက်တခုရှိလာတယ်။ အဲဒါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဆိုတာ သိလာတယ်...။ ဒါဟာပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်.. ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုကြီးတခုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်"
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှော်လင့်သော သူ၏မျက်နှာတွင် မျက်ရည်စများနှင့်....။
"စီးပွားရေးလို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတူနေထိုင်ဖို့ အိမ်အကြီးကြီးတလုံးလိုမယ်ဗျာ...ဒီအိမ်ကြီးထဲမှ ခင်ဗျားတို့အားလုံး ချမ်းချမ်းသာသာ လိုတရ နေဖို့ကို ကျွန်တော်က တာဝန်ယူမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်လက်ကိုတွဲထားကြပါ"
"ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့စီးပွားရေးအောင်မြင် မအောင်မြင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြဘူး။ လူတွေဟာလဲ တနေရာထဲမနေနိုင် အိမ်အပြောင်း အရွှေ့လုပ်ကြရတယ်..ဒါကြောင့် လေသန့်စက်တွေ၊ရေသန့်စက်တွေ၊အနှိပ်စက်တွေ ...စတဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ စက်တွေလူတွေကမဝယ်လိုကြဘူး။မဝယ်နိုင်ကြဘူး။"
"ဒီ စက်အသစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ အပိုင်ဝယ်ယူကြမယ်။ "
ဟင်... ဈေးကြီးပြီး လူတွေ မဝယ်ချင်တဲ့ စက်တွေ ဝယ်ပြီးဘာလုပ်မှာတဲ့လဲ...ရူးနေလား....။
"ကျွန်တော်တို့ ဝယ်ယူပြီးစက်တွေကို အသုံးပြုလိုတဲ့ ပြည်သူတွေကို ငှားရမ်းကြမယ်။ သူတို့အတွက်လဲ အဆင်ပြေမယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ ရေရှည် လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရမယ်..။"
" ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံဉာဏ်...။"
ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ ထို အတွေးအခေါ်သည် စီးပွားရေးသမားနှင့် ပြည်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသော အလုပ်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိနေပါသည်။
"ခင်ဗျားတို့ တယောက်ကို ၄၄ သိန်း အစုရှယ်ယာ ထည့်ရမယ်။ ၄၄ သိန်းဖိုးစက်တွေဝယ်ရင် အငှားခ တလ ၁ သိန်း ၂ သောင်းရမယ်..။ တနေ့ ၄၀၀၀ပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ရင်းထားတာမို့ ခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်...။ ခင်ဗျားတို့ ဘဏ်ထဲနေ့စဉ် အော်တိုငွေလွှဲစနစ်နဲ့ နေ့စဉ်ပို့ပေးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ငွေတွေ ကျွန်တော် ကိုင်မထားချင်လို့ နေ့စဉ်ပို့ပေးတာပါ ။"
"ခင်ဗျားတို့ တနှစ်ကို ၁၄ သိန်း ၄ သောင်း။ ၃ နှစ်ဆို ခင်ဗျား အရင်းပြန်ရပြီလေ။ ၃နှစ်ကျော်တာနဲ့ ထပ်ရမယ့်ဝင်ငွေတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ ရမယ့် နေ့စဉ်အမြတ်တွေဘဲ"
"ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ဘာအကျိုးအမြတ်ရှိမှာလဲ...? နားထောင်နေသူတယောက်ကမေးသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ်သည် အလွန်ဝမ်းနည်းသွားတော့သည်။
"ပြောရက်တယ်ဗျာ...ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီတဲ့လား ..?
"ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ မိသားစုတခုပါ။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ ကျွန်တော်ဟာလည်း အစုရှယ်ယာဝင်တယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချမ်းသာပြီးသား ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တဲ့ အကိုအကြီးဆုံးမို့လို့ အလုပ်အများဆုံးလုပ်ရမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်"
"ကျွန်တော် အလုပ်သမားတွေငှားပြီးစက်တွေ အငှားရအောင် ဈေးကွက်ရှာမယ်။ စက်တွေနားလည်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာငှားမယ်။ "
" အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကိုပြောပါတော့မယ်။ ခင်ဗျားတို့စက်တွေ အခု ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာဝယ်ထားတယ်။ နောင်နှစ်ကျရင် စက်ဆိုတာ အသစ်တွေပေါ်လာမြဲလေ ။လက်ရှိစက်တွေမော်ဒန်အောက်သွားပြီ။စက်ဆိုတာ ပျက်တာလဲရှိမယ်။ အငှားထိုင်းနေတဲ့ကာလရှိမယ်...။"
"ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဘဏ်ကို နေ့စဉ်ငွေလွှဲပေးနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိလာမယ်။"
"အဖြေကဘာလဲ....?ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံနဲ့ ထပ်ရင်းပြီး စက်အသစ်ဝယ်မလား? မလိုပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အစုရှယ်ယာအသစ်တွေရှာရုံဘဲ။ ဒါအဓိကအချက်ပါ။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ စက်တွေပျက်တာတို့ မော်ဒန်အောက်တာတို့ကို ကာမိမယ်။"
"ဘယ်လို လူမျိုးတွေဟာ အစုရှယ်ယာဝင်ဖြစ်နိုင်မလဲ...?
"ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုတော့ မကူညီနိုင်ဘူး။တွေ့ရာ မြင်ရာ အစုရှယ်ယာဝင်အဖြစ် ကျွန်တော် လက်မခံနိုင်ပါဘူး။"
" ခင်ဗျားတို့ ဆွေမျိုးသားချင်း ဆရာမိဘတို့ကို ပထမဆုံးဦးစားပေးပါမယ်။ ပြီးရင် ပိုက်ဆံမရှာနိုင်တော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ...စာကြိုးစား သင်နေရလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ..သားသမီးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ မိသားစုတွေ...ဒုက္ခိတကလေးတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက် ငွေလိုနေတဲ့မိသားစုတွေပါ။ အကယ်၍ ပိုက်ဆံချမ်းသာသူဆိုရင် ရိုးသားစွာပိုက်ဆံချမ်းသာလာသူတွေ လှူချင် တမ်းချင်သူတွေ ဖြစ်ရပါမယ်"
သူတို့ ကုမ္ပဏီ၌ အစုရှယ်ယာပါဝင်ချင်သူတိုင်း ပါဝင်ခွင့်မရပေ။
သူသည် အစ ပထမတွင် သူ့အကိုအရင်းကိုပင် အစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ်လက်မခံခဲ့ပေ။ သူ့အကိုသည် နောက်ပိုင်းတွင် ရလာသောငွေများနှင့် ပြည်သူကို အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများလုပ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည့်အတွက် ၄နှစ်အကြာ(၂၀၀၈ ခုနှစ် ) တွင် အစုရှယ်ယာဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ဖြင့် တယောက်ကို ၄၄သိန်းစီ ရင်းနှီး၍ အစုရှယ်ယာဝင်များနှင့်အတူ BMC ကုမ္ပဏီကြီး စတင်တော့သည်။
အစုရှယ်ယာဝင်တို့၌ရှိသော ငွေ ၄၄ သိန်းကို ဘဏ်ထဲတွင်ထားလျှင် ၃နှစ်အတွင်း အတိုး အနည်းငယ်သာရမည်ဖြစ်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ထံအပ်ပါက ၃ နှစ်ကြာလျှင် အရင်းငွေပြန်ရမည်....။ ၃နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်မူကား အနာဂတ်အတွက် စိတ်ချရသော နေ့စဉ်ဝင်ငွေဖြစ်ပါတော့သည်။
သို့သော် ရိုးသား၍ ကြိုးစားသောသူများသာဂျို ဟီး ဖားလ် ထံမှ ထိုအခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်သည်။
"ကျွန်တော် ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တခုကိုရောက်ခဲ့တယ်ဗျာ..."
"ကျောင်းသားတွေတဲ့ဗျာ မြင်မကောင်းဘူး။ ကားအကောင်းစားတွေနဲ့ တော်တော်ချမ်းသာပုံရလို့ ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တယ်"
"ကျောင်းသားတွေဟာ နေ့စား အလုပ်လဲမလုပ် မိဘတွေဆီကလဲ ပိုက်ဆံမတောင်းဘူး။ သူတို့ဘယ်က ပိုက်ဆံရနေလဲ....?"
"သူတို့ရဲ့လျို့ ဝှက်ချက်ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရပြီး ကျွန်တော်ချမ်းသာလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေကိုပြောပြပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ လစဉ်ငွေမှန်မှန်ရပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ ပညာသင်ကြားရမယ့်နည်းလမ်းပါ။ မိဘတွေ အသက်ကြီးပြီ ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့တော့ဗျာ"
ဂျို ဟီး ဖားလ်သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင်လည်း ဟောပြောပွဲများ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရ၍ ကျောင်းသားများအားလည်း ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။
စသည်ဖြင့်လက်ခွဲကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုမှ အခု ၂၀...။ ၂၀ မှ ၄၀....အထိကျယ်ပြန့်ကာ ပြည်သူများကို အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အသင်းဝင်တို့သည် တခါမှနောက်မကျသော နေ့စဉ်ဝင်ငွေကို တရက်မှမပျက်အောင် ရပါသည်။ ဂျို ဟီး ဖားလ်သည် သူတို့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်း မမှားပေ။
အမှန်တကယ် ရိုးသားစွာ ငွေလိုအပ်နေသော အစုရှယ်ယာဝင်များများရှာနိုင်သူတို့သည် ရာထူးတက်၍ ဂျို ဟီး ဖားလ် နှင့် အနီးကပ်ဆက်ဆံခွင့်ရသည်။
အနီးကပ်ရင်းနှီးခွင့်ရလေ ...သူ့အကြောင်းပိုသိလာလေ...သူ့ကို လေးစားလေလေ ဖြစ်ရသည်။ သူတို့ တစ်လ တစ်ခါ ဟောပြောပွဲလုပ်ကြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဆေးမကုနိုင်တဲ့သူတွေ ပညာမသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေ ပ ပျောက်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော် စာမသင်ခဲ့ရဘူးဗျာ....အမေက ပိုက်ဆံမရှိ...."
သူ့အသံတိမ်ဝင်သွားသည်။ သူ့မျက်ရည်များကိုသုတ်လိုက်သည်။ ငယ်စဉ်က သူ့ဘဝကဲ့သို့ ဆင်းရဲသူများကို တွေ့လျှင် ဝမ်းနည်းလွန်း၍ မျက်ရည်ကျမိသူလည်းဖြစ်သည်။
သူသည် အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ချင်းကို တကယ့်ကို သူ့မိသားစုဝင်လို ကူညီတတ်သည်။ စာတော်သော အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကလေးများကို ဆုချခြင်း ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ခြင်း စသည့် ကုသိုလ်ရမည့်အလုပ်တို့ကို အထူးစိတ်ဝင်စားသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သည်အလွန်ချမ်းသာသည်။ အဆောက်အဦးများ ကုန်တိုက်ကြီးများပိုင်ဆိုင်သည်။သို့သော် မာနမကြီးသောသူဌေးဖြစ်သည်။
သူသည် BMC ကုမ္ပဏီအပြင် အခြားနာမည်အသစ်တို့ဖြင့် ဟိုတယ်နင့်ခရီးသွားလာရေး၊ အသက်အာမခံ၊ အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီ အစရှိသည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီပေါင်း၈၀ရှိသည်။
သူ၏ ကုမ္ပဏီတို့သည် တောင်ကိုးရီးယားတနိုင်ငံလုံး၌ နေရာအနှံ့အပြားရှိနေသည်။ သူ့ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များကို မှန်ကန်စွာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေပေးနိုင်သော လွန်စွာ ကတိတည်သောသူဖြစ်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ်၏ စီးပွားရေးမိသားစုသည် ၂ သောင်း ၄ ထောင် ၅ ရာ ရှိနေလေသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ်၏ စီးပွားရေးမိသားစုသည် ၇ သောင်းကျော်ဖြစ်လာသည်
ဒဲဂုမြို့( Daegu )ထောက်လှမ်းရေးတို့က ချမ်းသာလွန်းသောသူ့ကို မသင်္ကာဖြစ်ကြသည်။ သူ၏ အောက်ခြေ ကုမ္ပဏီတို့ကို စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်သည်။
"ဆရာကြီး...ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ ၄ ခုကို တပြိုင်နက် ထောက်လှမ်းရေးတွေဝင်စစ်သွားတယ်။"
"ဪ...လူတွေ...မနာလိုစိတ်...။ ဝိသမလောသား သူဌေးတွေကိုတော့ စစ်ဆေးရကောင်းမှန်းမသိ.... ။ စစ်ဆေးပါစေကွာ... ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ပါဘူး..."
၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ည ၁၁နာရီ...။
TV ၌ အခြား အစီအစဉ်များပြနေရာမှ "အထူးသတင်း" ဟူ၍ သတင်းကြေငြာသူပေါ်လာ၍ ကြားဖြတ် အထူးသတင်းတစ်ရပ် ကြေငြာခဲ့သည်။
ထို အထူးသတင်းသည် ကိုရီးယားပြည်သူတို့အား သွေးပျက်စေလောက်အောင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့သည်။
" BMC ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဂျို ဟီး ဖားလ် သည် လူပေါင်းများစွာ၏ ချွေးနည်းစာများကို ပိပိရိရိ လိမ်လည်ရယူခဲ့သော လူလိမ်ဝိဇ္ဇာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော အပတ်ကတည်းက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်၍ တွေ့ရှိပါက အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း..တာဝန်ရှိသူများကလည်း လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း...... သတင်းအစုံလင်မှာ...."
ဟူသော စာတမ်းအောက်မှာ သူတို့ကြည်ညိုခဲ့ရသော ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ မျက်နှာ...။
ဆင်းရဲသားလက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျောင်းသားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ဂျို ဟီးဖားလ် ထံပေးရန် အစိုးရဘဏ်မှကြေးငွေများကို ချေးခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ ပြန်ဆပ်ရမည်နည်း။
တချို့က အိမ်အပေါင်ခံ၍ ချေးထားသော ဘဏ်မှငွေများ....၊တချို့က မင်္ဂလာဆောင်ရန်စုထားသောငွေများ...၊တချို့ကျတော့ သားသမီးတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားရန် စုထားသောငွေများ...၊ နေမကောင်း၍ ခွဲစိတ်ကုသရန်စုထားသောငွေများကို ခဏရင်းထားကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပါနေသည်။ သူတို့သည် ဆင်းရဲသဖြင့် လစဉ် ဝင်ငွေကိုမျှော်လင့်လျှက် သူငယ်ချင်းများစု၍ ကျောင်းမှထောက်ပံ့ကြေးငွေတို့အား ဘဏ်မှချေးငွေများ ဂျို ဟီး ဖားလ် အား ပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
ဂျိုဟီးဖားလ်၏ အကိုအရင်း.... ။
သူသည်လည်း မကြာသေးခင်ကပင် ဂျိုဟီးဖာလ်အား ရှိသမျှငွေ အကုန်ပေးအပ်၍ အစုရှယ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ ကလေးများ ကျောင်းထားရန်ပင် ငွေမရှိတော့ပေ။
သူတို့အမေကြီးက နယ်မြို့လေးတွင် ဆင်းရဲမြဲဆင်းရဲလျှက်....။ ဂျိုဟီးဖားလ် သည် အမေကြီးအား မကူညီခဲ့ပါ၊
သူ့ကိုယုံစားမိသောသူများ အားလုံး အထိနာ၍ ဆင်းရဲကုန်ကြသည်။
သူသည် ၇သောင်းကျော်သော တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားတို့မှ ကိုရီးယားနိုင်ငံသုံးငွေဖြစ်သော ဝမ် ( Won )ကုဋ္ဋေပေါင်း သိန်း၄၀၀ကျော် ကိုလိမ်လည်၍ ယူသွားခဲ့သော လူလိမ်အကြီးစား ဝိဇ္ဇာတဦးဖြစ်သည်။ (ဒါတောင် မဖော်ထုတ်နိုုင်သောငွေများကျန်သေးသည်ဟုဆိုသည်။)
ကိုရီးယားငွေ ကုဋ္ဋေပေါင်း သိန်း၄၀၀ကျော် ဒေါ်လာနှင့်ပြောလျှင် ($3.5 billion) ဖြစ်ပါသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သည် သူ၏ ညာလက်ရုံး ကင်မ် ထဲ ယုန်း (Kim Htae Yong) ကိုပြောလိုက်သည်။
"အင်း.... အချိန်ကျပြီ...။ အရေးပေါ် အစည်းဝေးခေါ်....။
သူတို့ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးလုပ်သည်။
အတန်းပညာ မသင်ခဲ့သော လူလိမ်သည် အတန်းပညာ အလွန်ကြိုးစားခဲ့သော ထောက်လှမ်းရေး၊ရှေ့နေ၊တရားသူကြီး တို့ကို ငွေဖြင့်ချုပ်ကိုင်လိုက်တော့သည်။
သူ၏ ညာလက်ရုံး ကင်မ် ထဲ ယုန်း (Kim Htae Yong)က အားလုံးကို လာဘ်ထိုးထားလိုက်သည်။
လာဘ်စားထားသော ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဆီမှ ဂျို ဟီး ဖားလ် လိမ်လည်သော အမှုအကြောင်းကို တောင်ကိုးရီးယား MBC ရုပ်သံတွင် ယနေ့ည ကြေငြာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးသည်။
ထိုအခါ ရှိစုမဲ့စု ရင်းနှီးထားသည့်ငွေတို့ အလိမ်ခံရသည်ကို သိသောအခါ ပြည်သူတို့ တုန်လှုပ် ဒေါသဖြစ်၍ သူ့ကို ရန်ပြုကြတော့မည်။
ပြည်သူများသည် MBC ရုပ်သံတွင် ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ ငွေလိမ်မှု အထူးသတင်းကို ကြည့်ပီး ကမ္ဘာပျက်သလို စိတ်ဒုက္ခရောက်ကြသည်။ တနိုင်ငံလုံး ပူဆွေးဆောက်တည်ရာမရပဲ ငိုကြွေးထိတ်လန့်နေကြသည်။
ထိုအချိန်မှာပဲ ဂျို ဟီး ဖားလ် နှင့် သူ၏မိသားစု၊ ညာလက်ရုံး၊ တပည့် ၄ ယောက် နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူ သူနာပြုတို့သည် ငွေထုပ်များကို ပိုက်၍ ရဲနှင့် ရေတပ်အကူအညီဖြင့် တရုတ်ပြည်သို့ သင်္ဘောဖြင့်လုံခြုံစွာ ထွက်ခွာခဲ့တော့သည်။
သူသည် တရုတ်ပြည်တွင် နာမည်အသစ် နိုင်ငံသားကဒ်အသစ်ဖြင့် ဘဝအသစ်ကိုထူထောင်လိုက်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက အပြောအဆိုကျွမ်းကျင်သည်။ တဖက်သား ယုံကြည်အောင် ရိုးသားသောမျက်နှာနှင့် လိမ်ညာခြင်းသည် သူ၏ ထူးချွန်သော အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
"ငါ အမေရိကား သွားမလို့ကွာ..။ ငါ့အမေနေမကောင်းလို့မသွားဖြစ်တာကွ။ အမေရိကန်အမျိုးတွေက ခေါ်လှပြီ..."
သူငယ်ချင်းများအထင်ကြီးသွားသည်။ ပါလာသော မုန့်များသူ့ကိုထိုးကျွေးတော့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်၍ရလာသောငွေနှင့်လောင်းကစားပြုလုပ်လာသည်။ လောင်းကစားနိုင်လျှင် ငွေရှိသည်။ လောင်းကစားရှုံးတော့ အရပ်တကာလှည့်၍ လိမ်စားရင်း အသက် ၂၀ အရွယ်တွင် မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာခဲ့သည်။
သည်လိုနှင့် အသက် ၄၀ကျော်သည့် အထိဘာမှအလုပ်တခု မယ်မယ်ရရမရှိ...။ သူ့အတွက် ပိုက်ဆံဆိုတာ လွယ်လွယ်ရနေသည်ကိုး။
သူသည် သူ့အကိုထံမှ ပိရမစ်စီးပွားရေးရိုက်စားခြင်းစနစ်ကို လေ့လာခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံအနည်းငယ်စု ကာ ပြည်သူများကို လိမ်ရန် လူကောင်းယောင်ဆောင် သူဌေးယောင်ဆောင်၍ ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုစက်ငှားစားခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအားလုံးသည်" လေ" ဖြင့်လုပ်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်အစပိုင်း၌ အယောင်ပြ အနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စက်ဘယ်နှစ်လုံးဝယ် ဘယ်နှစ်လုံးငှား စသည်တို့ကို စာရွက်စာတမ်းအတုများပြုလုပ်၍ အစုရှယ်ယာဝင်တို့အားပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစုရှယ်ယာသမား တို့ ရင်းသော ၄၄ သိန်း ကိုယူထား၍ သူတို့ငွေဖြင့် သူတို့ကို တလ ၁ သိန်း ၂ သောင်းပြန်ပေးနေခြင်းဖြစ်လေသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အစပိုင်းမှ အသင်းဝင်ဟောင်းများကတော့ သူတို့၏ ငွေအရင်းများပြန်ရ၍ အမြတ်များ စ ပြီးရနေချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုလူများကို ကြည့်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံသောသူများကတော့ ဘဝပျက်ကြပြီ။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ပါးစပ်လေးတခု အသုံးချ၍ အပင်ပန်းခံလုပ်စရာမလိုသည့် လူလိမ်ဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် လူလိမ်တို့၏ ပိရမစ် စီးပွားရေး ရိုက်စားခွင် (pyramid scheme )သည် ထိုခေတ်ကာလ၌ လိမ်စား၌ မရအောင် ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သော်လည်း ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏နည်းသည် အသွင်အသစ်ဖြစ်သည်။ ပိရိလွန်းသည်။
သူ၏ ပိရမစ် စီးပွားရေးရိုက်စားခွင်မှာ ယခင်က လူလိမ်ပိရမစ်များကဲ့သို့ ဆေးအတုရောင်းခြင်း မိတ်ကပ်အပေါစားရောင်းခြင်း မဟုတ်သည်ကတကြောင်း၊အစပိုင်း၌ ငွေရင်းနှီးသောသူများ တစ်နေ့ တစ်ခါပိုက်ဆံ အမှန်တကယ် ရနေခြင်းတို့ကြောင့် အသွင်တမျိုးပြောင်းနေသော ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ ပိရမစ် စီးပွားရေးရိုက်စား စနစ် ကို မည်သူကမျှမရိပ်မိခဲ့ပေ။
အခြား ပိရမစ်စီးပွားရေး ရိုက်စားများလို သူသည်ပင်ပင်ပန်းပန်း အစုရှယ်ယာဝင်များရှာစရာမလို...။ သူက စေတနာရှင်ကြီး ကယ်တင်ရှင်ကြီးအနေဖြင့် အလိုလိုဝင်လာသော အစုရှယ်ယာများကို လက်ခံရုံပဲ ဖြစ်သည်။
TV အစီအစဉ်တို့မှ ဒုက္ခသည်တို့ အဖြစ်ကိုနေ့တိုင်းကြားရသောအခါ လာဘ် ယူ၍ သင်္ဘောနှင့်တင်ခေါ်ပေးခဲ့သည့် ရေတပ်အရာရှိသည် နောင်တရလာသည်။ သူ့အပြစ်ကို ဝန်ခံ၍ လာဘ်စားသူများအားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြောပြလိုက်လေသည်။
ထောက်လှမ်းရေးများ... အကုန် အဖမ်းခံရ၍ ထောင်ထဲဝင်ကြရတော့သည်။
ထိုအထဲတွင် ကမ်ကောင်းဂျွန်း (Kim Kwang-joon) ဟူသော အစိုးရ ရှေ့နေသည် ဂျို ဟီး ဖားလ်ထံမှ ကိုးရီးယားငွေ သန်းပေါင်း ၂၄၀ လာဘ်စားထားလေသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ
ကိုရီးယား၌ကျန်ခဲ့သော ဂျို ဟီး ဖားလ် လက်အောက်မှ ဝန်ထမ်း ၁၃ ယောက်အဖမ်းခံရသည်။ သူတို့သည် ငွေလိမ်သည့်အလုပ်ဖြစ်သည်ဆိုတာကို မသိပါဟု ထွက်ဆိုကြသဖြင့် ထောင် ၃ နှစ်စီသာကျခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်မှရဲများက ဂျို ဟီး ဖားလ် နှင့်အတူနေထိုင်သောသူ တပည့် ၄ ယောက်မှ ၃ ယောက်ကိုဖမ်းမိသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ် ကိုမူ ရှာမတွေ့။
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ကျန်တပည့်တယောက်သည် တရုတ်ပြည်ရဲများမှတဆင့် ရုတ်တရက်လာ၍ အဖမ်းခံလေတော့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
တရုတ်ပြည် (Wuxi, southern Jiangsu Province, China)
ဂျို ဟီး ဖားလ် ဟော်တယ်၌ အရက်သောက်၍ သူ၏ ချစ်သူမိန်းမနှင့် ကာရာအိုကေနှင့် သီချင်းဆိုနေစဉ် ရုတ်တရက်သွေးများအန်၍ ဆေးရုံပို့လိုက်ရပြီး နှလုံးသွေးရပ်၍ သေဆုံးသည်ဟု တရုတ်ပြည်မှရဲများက အတည်ပြုလာသည်။
သက်သေကတော့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု၏ အသုဘ ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။
သူ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုသည် အရိုးပြာအိုးထမ်း၍ ကိုရီးယားသို့ပြန်လာလေသည်။
" ဘာ... ? ပြည်သူတွေကို အရူးတွေလို့များထင်နေသလား"
"အသုဘကို ဗီဒီယိုရိုက်သတဲ့လား။ ဂျို ဟီး ဖားလ် ကလည်း အိပ်ပျော်နေသလိုဘဲ..."
"ဘယ်သူက သေတဲ့အချိန် ကင်မရာက အသင့်ရှိပါလိမ့်..." ( ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ထားသည် မဟုတ်ပါ..)
တရုတ်ပြည်မှ ရောက်ရှိလာသည့် ဂျို ဟီး ဖားလ် သေဆုံးကြောင်းစာသည် လေကြောင်းဖြင့်လာသော်လည်း တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံကြားမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တံဆိပ်တုံး မပါခဲ့ပေ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အလောင်း၏ DNA ကိုတောင်းသည်။ သို့သော် ကျန်ရစ်သူမိသားစုက မီးရှို့လိုက်၍ အကုန်ပြာကျသွားသည်ဟုဆိုသည်။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ သူသေဆုံးသွားသောရက်စွဲ နောက်ပိုင်းတွင် လူတချို့ သူဂေါက်သီးရိုက်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဂျို ဟီး ဖား ၏ တူလေးက ဖုန်းပြောသည်ကို မသင်္ကာ၍ ရဲများက အသံသွင်းကြရာ တူလေးက " ဦးလေး စိတ်ဆိုးနေတာလား" ဟုပြောကြောင်းလည်း သိရသည်။
တချို့ကလည်း သူ့ကို ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတွင်တွေ့သည် အချို့က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်တွေ့သည်ဟုဆိုသည်။
သူသည် မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကိုရီးယားမှ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ သားကို ဖမ်းဆီးလိုက်လေသည်။ သို့သော် ဖခင်ငွေများကို သိမ်းဆည်းပေးမှုဖြင့် ထောင် (၂)နှစ်သာကျခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနစ် နိုဝင်ဘာလ
ဂျို ဟီး ဖားလ် ၏ ညာလက်ရုံး ကင်မ် ထဲ ယုန်း (Kim Htae Yong) ကိုဖမ်းမိ၍ အမှုများကိုထပ်စစ်ကြသည်။
ဂျိုဟီးဖားလ်အား နောက်ဆုံးတွင် ဥပဒေအရ သေသူစာရင်းထဲထည့်ထားရသော်လည်း ယခုထက်ထိ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတို့ သိချင်သောအရာ တခုရှိပါသည်။
ဂျို ဟီး ဖားလ်သည် တကယ်ပဲသေဆုံးသွားသည်လား ယ္ခုအချိန်အထိ အသက်ရှင်နေသည်လား? သူဘယ်မှာလဲ ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။
သူ့ကြောင့်ဘဝပျက်၍ တောင်းစားရသော သူများ ယနေ့တိုင်ရှိနေသေးသည်။
ပိရမစ် ရိုက်စား စီးပွားရေးစနစ် (pyramid scheme)
၁- "A" ဆိုသော လူလိမ်တဦး က ( ရောင်းမထွက်/ တရားမဝင်/လုပ်ငန်းအတု ) ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တခုကို "B" အား အသင်းဝင်အဖြစ်အယုံသွင်း၍ ပိုက်ဆံပေး၍ ဝယ်စေသည်။
၂- "B" ကလည်းထိုနည်းတူ "C" နှင့်" D" အား အသင်းဝင်အဖြစ် စည်းရုံး၍ ပိုက်ဆံပေး၍ ဝယ်စေသည်။
၃-"C" နှင့် "D" ကလည်းထိုနည်းတူ "E,F,G,H" အား အသင်းဝင်အဖြစ် စည်းရုံး၍ ပိုက်ဆံပေး၍ ဝယ်စေသည်။
"A" သည် ထိုနည်းဖြင့် ပိရမစ်ကဲ့သို့ အသင်းဝင်များများရအောင် တည်ထောင်သည်။
အောက်ခြေ အသင်းဝင်များလာလေလေ အပေါ်ပိုင်းမှလူများ ချမ်းသာလာလေလေဖြစ်သည်။သင်သည် အပေါ်ပိုင်းရောက်ချင်၍ ပိုက်ဆံများများရလိုလျှင် အသင်းဝင်များများစည်းရုံးရမည်။
ပိရမစ်ထဲဝင်မိသူများသည် သူတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ရုန်းထွက်လွတ်မြောက်ရန် မလွယ်ကူကြပါ။
"A" ကတော့ အကျိုးအမြတ်ကို အခံစားရဆုံး သူဖြစ်သည်။
အဓိကပြဿနာမှာ ထိုပစ္စည်းများ/ လုပ်ငန်းများ သည် အမှန်အကန်မဟုတ်ပေ။ စားသုံးသူတို့က ရိပ်မိလာအခါ ထိုလူလိမ်သည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သည်။ ထိုအခါ သူ့အောက်မှ သူများသည်လည်းလူလိမ်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တော့သည်။
ထိုသို့သော လိမ်ကွက်ကို ပိရမစ်စီးပွါးရေးရိုက်စားခွင် ( pyramid scheme) ဟုခေါ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကျွန်မ မြန်မာပြည်ကို ခဏ ပြန်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ပိရမစ်စီးပွားရေးရိုက်စားခွင်ကို အသုံးပြုနေသော လူလိမ်တချို့အား အသွင်အမျိုးမျိုး နှင့်တွေ့နေရပါသည်။ ထို လူလိမ်များအား ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်နှင့် မိမိလုပ်နေသော အလုပ်သည် ပိရမစ်စီးပွားရေးရိုက်စားခွင် ဟုတ်၊မဟုတ်ပြန်၍ စဉ်းစားနိုင်စေရန်အတွက် တောင်ကိုးရီးယားမှ တကယ့် အဖြစ်အပျက်မှန်ကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
သင်တို့ ဂျို ဟီး ဖားလ် ကဲ့သို့ လူလိမ်ဝိဇ္ဇာနှင့် တွေ့လျှင် သင့်ချွေးနည်းစာ ပြန်ရဖို့မလွယ်တော့ပေ။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် Master (2016 ) ဟူသော ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကြည့်၍ ကျွန်မအတ်ာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။
Master ရုပ်ရှင်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတို့၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရုပ်ရှင် ဇာတ်သိမ်းတွင် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ (မင်းသား Gang Dong-won ) က ဂျို ဟီးလ် ဖားလ် (မင်းသား- Lee Byung-hun )ကိုမိအောင်ဖမ်း၍ ပြည်သူ ပြည်သားများကို ငွေများပြန်လည်ဝေပေးနေသည်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှာမူ ပြည်သူတို့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဝမ်းမသာနိုင်ခဲ့ပေ။
သမာအာဇီဝဖြင့် ရှာထားသော ငွေတကျပ်သည် လိပ်ပြာလုံ၍ ညဘက်တွင်လည်း အပူအပင်မရှိအိပ်ပျော်နိုင်သည်။ သမာအာဇီဝငွေသည် နည်းကောင်းနည်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ လိုက်ဖူးမြှော်နေစရာမလိုပဲ လက်မထောင်၍နေနိုင်သည်။ မှန်သည့်ဘက်မှ လက်ညှိုးထိုး၍ ခပ်တင်းတင်း ပြောဆိုနိုင်သည်။
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကို စတင်ပြီး လိမ်လိုက်ပြီဆိုလျှင် ရှေ့ကအလိမ်မပေါ်အောင် နောက်ဆက်တွဲ ဆင့်ကာဆင့်ကာ ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေ ဆက်လက်တီထွင်ကာ တသက်လုံး လိမ်စဉ်ဘဝဖြင့်သာနေနေရတော့သည်။ အလိမ်ပေါ်မှာစိုး၍ ကျီးလန့်စာစားဘဝဖြင့်နေရသည်။
အလိမ်ပေါ်သွားလျှင်လည်း အရှက်ကွဲ ဒုက္ခရောက်သည့်အပြင် မိသားစုကိုပါ လူတောမတိုး မျက်နှာမဖော်ရဲ သည့် ဘဝကို ကျရောက်စေတော့သည်။
သူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျပြီးမှ လိမ်လည်ပြီး စားရသော ထမင်းတလုတ်သည် သံရည်ပူမြိုရသကဲ့သို့ ပူလောင်လှကြောင်း လူလိမ်များသာ သိခဲ့ကြမည်ဆိုလျှင်......။
Korea TV news ,
MBC- PD interviews,
Pictures and videos from 'Naver')
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၇
Credit: မရွှေမိုး - ကိုရီးယားရဲ့ Personal Blog
Posted by Alex Aung at 9:40 AM No comments:
Labels: စီးပွားရေး, ဗဟုသုတ, သမိုင်းနှင့် မျက်မှောက်ရေးရာကဏ္ဍ
Posted by Alex Aung at 9:57 AM No comments:
“မနောက်ပါနဲ့ဦးလေးရာ” “မနောက်ပါဘူး ငါ့တူရာ” တကယ်ပြောတာပါ။ တိုးတက်ချင်ရင် လေ့ကျင့်ပါ။ များများတိုးတက်ချင်ရင် များများလေ့ကျင့်ပါ။ တစ်ခုပဲရှိတယ် လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နည်းမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ရင်၊ သို့မဟုတ် ဖြတ်လမ်းမသိရင် ဆရာ မပြရင် ငါးပိဖုတ်တောင် နည်းမကျ ဆိုသလို တိုးတက်မှုနှေးကွေးနိုင်တယ်။ ထိရောက်မြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သိထားရင်တော့ ပိုပြီးခရီးရောက်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ဓါတ်ပုံပညာလေ့လာနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျနော်သိထားသလောက်၊ ဖတ်မှတ်လေ့လာထားသလောက် ထိရောက်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်ဟာမဆို အောက်ခြေကစရမှာပါ။ ရေတွင်းတူးတာက လွဲလို့ပေါ့လေ။ ဓါတ်ပုံပညာအခြေခံတွေကို သိအောင်လေ့လာပါ။ Exposure ဆိုတာဘာလဲ။ Aperture, ISO နဲ့ Shutter speed တွေက exposure ပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလဲ။ F-stop ဆိုတာဘာလဲ။ ကင်မရာတစ်လုံး ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံကဘာလဲ စတာတွေကို လေ့လာပါ။ ကင်မရာလက်ထဲရောက်လာလို့ မျက်စိထဲ လှတယ်ထင်တာတွေ လျှောက်ရိုက်ပေမယ့် ပုံကောင်းထွက်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကင်မရာကမြင်တာနဲ့ မျက်စိကမြင်တာ ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအခြေခံတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့ websites တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ခုကို အောက်မှာ လင့်ပေးထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဲလိုအခြေခံလေးတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးဖို့တော့ စိတ်ကူးထားတယ်ဗျာ။
ဒီလင့်က Understanding Aperture - A Beginner's Guide ပါ။ aperture အကြောင်း၊ DoF လို့ခေါ်တဲ့ Depth of Field အကြောင်းတွေ ရှုင်းပြထားပါတယ်။ အဲဒီကမှ တခြား Shutter, ISO အကြောင်းတွေ စပ်ဆက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကင်မရာဟာ ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်လို control လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ သိအောင်လေ့လာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ မျောက်အုံးသီးရသလိုပဲ နေမှာ။ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ Aperture/Shutter speed dial ကို ဘယ်ညာ လှည့်မှားနေတာ။ Metering mode ပြောင်းဖို့ menu ထဲမှာလိုက်ရှာနေရတာ၊ ISO ဘယ်မှာပြောင်းရမှန်းမသိတာ စတာတွေနဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ် (မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့)။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကင်မရာအကြောင်း အူမချေးခါးမကျန် မသိတောင်မှ တော်တော်များများတော့ သိထားသင့်တာပေါ့။ အကောင်းဆုံးက ကင်မရာနဲ့အတူပါလာတဲ့ Manual ကိုဖတ်ပါ။ ကင်မရာဝယ်တုံးက မပါလာလဲ အင်တာနက်မှာ အလကားဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ဒေါင်းဖို့အခက်အခဲရှိရင် comment section မှာကင်မရာ Model ပေးခဲ့ပါ။ ဒေါင်းပြီး email ပို့ပေးပါ့မယ်။ စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလှပြီလို့လဲ ဘယ်တော့မှ မထင်ပါနဲ့။ Manual ထဲမှာ ကိုယ်မသိတာတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ Manual ကိုကျေညက်သွားရင်တော့ အုံးသီးကနေ ငှက်ပျောသီးဖြစ်သွားပြီပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် ခင်မာလာကို မျက်စေ့အောက်က အပျောက်မခံပါနဲ့။ သွားလေရာမှာ ကင်မရာပါပါစေ။ ကင်မရာလက်ထဲရှိနေရင် ရွစိရွစိနဲ့ ဟိုဟာရိုက်ချင် ဒီဟာရိုက်ချင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ ပထမတော့ point and shoot အဆင့်ပေါ့။ အဲဒီကနေ တဆင့်တက်လာရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်တက်လာမယ်။ မြင်တက်လာမယ်။ ဘယ်ဟာလေးကို ဘယ်လိုရိုက်လိုက်ရင် ပုံကောင်းလေးဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေ ပိုပြီးရင့်ကျက်လာမယ်။ ကင်မရာမပါတောင်မှ စိတ်ကူးထဲမှာ ရိုက်ကြည့်တက်အောင် ကြိုးစားပြီးအကျင့်လုပ်ပါ။တကယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ပုံဂရုကြီးတွေဆီက ရနိုင်သလောက် လေ့လာသင်ယူပါ။ လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး တပည့်ခံရမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းသပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ Ansel Adams ရဲ့တပည့်တော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမလား။ သူတို့ရဲ့ပုံတွေက ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကောင်းနေသလဲ၊ composition အယူအဆတွေ၊ အလင်းအမှောင် အယူအဆတွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စုတုပြု လုပ်ရမှာပေါ့။ ဂရုကြီးတွေလို့ အများက လက်ခံထားကြတဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးတချို့နဲ့ နာမည်ကျော် ဓါတ်ဆရာတချို့အကြောင်းကို လေ့လာနိုင်အောင် link လေးတွေ အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
5. Projects, projects, porjects
Project တွေလုပ်ပါ။ project တစ်ခုပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ရှည်ဇွဲသန်ဖို့လိုပါတယ်။ project အဆုံးမှာ တိုးတက်မှုတစ်ခုတော့ အနည်းဆုံးရှိမှာပါ။ Project ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် idea လေးတွေရအောင် ထင်ရှားတဲ့ project အချို့ကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
365 or Project 365 - ဓါတ်ပုံသမားတိုင်းလိုလို ကြိုးစားကြတဲ့ project ပါ။ ရည်မှန်းချက်က ရှင်းပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှုံးနဲ့ တစ်နှစ်စာ ၃၆၅ ပုံရိုက်ပါမယ်လို့ ပြောတာပါ။ တစ်နေ့တစ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွန်းတယ် မထင်ပါနဲ့။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကင်မရာမကိုင်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေ ရှိလာမှာ ကျိန်းသေပေါက်ပါ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ငါ့မှ ဒီပရောဂျက်ရှိနေတယ်၊ ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ commitment ရှိမှသာ အောင်မြင်ပြီးဆုံးနိုင်မှာပါ။
Project 52 or 52 Weeks - ဒါကတော့ 365 ထက်နည်းနည်းပို သက်သာတဲ့ ပရောဂျက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ပုံ၊ တစ်နှစ် 52 ပတ်၊ 52 ပုံ ရိုက်ရမှာပါ။
100 Strangers - ဒါကတော့ အထူးသဖြင့် Street photographer တွေအတွက်ပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ လမ်းပေါ်က လူစိမ်း အယောက် ၁၀၀ ရဲ့ပုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ပါ။ တစိမ်းတစ်ယောက်ကို ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ဖို့ဆိုတာ ပေါ့သေးသေး စိမ်ခေါ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် အနည်းဆုံးတော့ အထိုးခံရနိုင်တယ် (မျက်စောင်း)။
Nifty Fifty - ဒါကတော့ ဓါတ်ဆရာအချင်းချင်းပဲသိတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပါ။ 50mm Lens ကိုပြောတာပါ။ 50mm Lens ဟာ လူ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Crop frame camera အတွက်တော့ 35mm ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီပရောဂျက်မှာတော့ 50mm Lens ကိုပဲသုံးပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရိုက်ပါ့မယ်ပြောတာပါ။ ဥပမာ ၃လ၊ ၆လ စသဖြင့်ပေ့ါ။ တခြား Lens တွေပြောင်းမသုံးပဲ၊ အထူးသဖြင့် Zoom Lens တွေမသုံးပဲ Fixed focal length lens သို့မဟုတ် Prime Lens တွေပဲသုံးခြင်းအားဖြင့် composition skill ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ တနေရာထဲ အသေရပ်ပြီး Zoom လေး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်နေတာထက် ခြေထောက်ကို အသုံးပြု နေရာယူရတော့ ပိုပြီးမြင်တက်လာမှာပါ။ focal length အသေနဲ့ လိုချင်တဲ့အရာတွေပါဝင်လာအောင် angle အမျိုးမျိုးကနေ အနီးအဝေး ကြံဆပြီး ရိုက်တက်လာမယ်။ အင်မတန်အကျိုးရှိပါတယ်။
Self Portraits - ရိုက်စရာမရှိ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ရိုက်ဗျာ။ တကယ်ပြောတာပါ။ အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးရိုက်မလား၊ ဥပမာ 365 project မှာ self portraits တွေချည့်ပဲ 365 ပုံရိုက်တာ။ ဒါမှမဟုတ် Self Portarits 100 ဆိုပြီး ပုံ ၁၀၀ ပြည့်အောင်ရိုက်တာပေါ့။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ရိုက်တာပဲ လွယ်တယ်မထင်ပါနဲ့။ ပုံ ၂၀ လောက်ရိုက်ပြီးရင် ဘယ်လိုထပ်ရိုက်ရပါ့မလဲဆိုတာ တကယ်ခေါင်းစားစရာဖြစ်လာမှာပါ။ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
Colors - ဥပမာ Red ဆိုပြီး ကာလာအနီရောင်တွေကို အသားပေးရိုက်တာမျိုး၊ စာတိုက်ပုံး၊ မီးသတ်ကား စသဖြင့်ပေါ့။ သို့ကလို ပရောဂျက်တွေ များစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း တီထွင်ကြံဆနိုင်ပါတယ်။
6. Refine Your Perspective
နေ့စဉ်တွေ့နေကြ အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပဲ ဓါတ်ပုံမျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ အပြင်ထွက်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုလေးတွေ ဥပမာ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ပုလင်းဖောက်တံ၊ ရေပိုက်ခေါင်း၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ အလုပ်စားပွဲပေါ်က ဘောပင်ရောင်စုံလေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ခွက်၊ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်၊မောက်စ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ရွေးပြီးတော့ အနည်းဆုံး ၁၀ပုံ ၁၅ပုံလောက် ရှု့ထောင့်အမျိုးမျိုး၊ Focal length အမျိုးမျိုး၊ Setting အမျိုးမျိုး၊ မတူညီတဲ့ အလင်းရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ပတ်ကို တစ်ခု ရွေးချယ်ပြီး ရိုက်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရိုးရှင်းမှုထဲကနေ ထူးခြားတာလေးတွေကို ရှာတွေ့တက်ဖို့ပါ။ အဲလိုလေ့ကျင့်သွားရင် သာမန်ကာရှံကာမြင်ရုံမဟုတ်တော့ပဲ သာမန်အရာဝတ္ထုလေးတွေဆီက စိတ်ဝင်စားစရာ အရောင်တွေ၊ အရိပ်တွေ၊ ပုံသဏ္ဍန်တွေကို မြင်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ပုံဟာ အနုပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားအနုပညာတွေကိုလည်း လေ့လာနိုင်ရင် ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ အမြင်ရှိလာမှာပါ။ ပန်းချီ ပန်းပုပြခန်း၊ ပါဖောင့်မန့်ပြပွဲ၊ စတာတွေကို သွားပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပုံလေးတွေ ပြကွက်လေးတွေကို sketch လေးခြစ်ပြီးမှတ်ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်အချက်လေးတွေကို သဘောကျတယ်၊ ဘယ်အချက်ကိုတော့ဖြင့် သိပ်မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ မှတ်စုလေးတွေပါ တွဲရေးထားပါ။
8. Accept the Challenges
ဓါတ်ပုံဆရာတိုင်းမှာ ကိုယ်အားသန်ရာသန်ရာ genre တစ်ခုစီတော့ ရှိကြပါတယ်။ Landscape, Portrait, Candid, Nature, Fashion, Wildlife, Macro စသဖြင့်ပေါ့။ စိမ်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်မသန်တဲ့ genre တစ်ခုခုကို စပြီးရိုက်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ Landscape သမားဆိုရင် Portrait သို့မဟုတ် Fashion ပြောင်းရိုက်ကြည့်ပါ။ Knowledge အသစ်တွေ၊ Skill အသစ်တွေ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
Photography Composition Rules တွေကို တက်နိုင်သလောက် လေ့လာပါ။ The Rule of Third, Leading Lines, Golden Ratio (or) Divine Proportion (or) The Fibonacci Rule, Golden Triangles, Balancing Elements စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Rules တွေရဲ့ ပုံစံခွက်ထဲတော့ ခြေချုပ်မိမနေပါစေနဲ့။ Rules are meant to be broken ဆိုသလိုပဲ ဖောက်ထွက်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပန်းတိမ်မတက်ခင် ရွှေခိုးသင် ဆိုသလိုမဖြစ်ရအောင် အခြေခံ rules တွေကိုတော့ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအောက်က လင့်တွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Divine Composition with Fibonacci's Ratio
18 Composition Rules For Photos That Shines
10. Learn to See
မြင်တက်အောင် လေ့ကျင့်သင်ယူပါ။ stop looking, learn to see. စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်တွေ၊ ပုံသဏ္ဍန်တွေ၊ အလင်းရောင်၊ အရိပ်တွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ repetition pattern တွေ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးထဲမှာ တစ်ခုထဲ ထူးထူးခြားခြား ထင်ရှားနေတာမျိုးတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အပြုအမူု ဟန်အမူအရာတွေ (ပျော်ရွှင်နေသလား၊ ဝမ်းနည်းနေလား၊ အထီးကျန်တဲ့ပုံလား၊ နက်နက်နဲနဲ တွေးတောနေပုံလား စသဖြင့်) ကိုယ့်ဓါတ်ပုံထဲမှာထင်ဟပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ မတူကွဲပြားမှု၊ ထင်းကနဲမြင်နိုင်တဲ့ ခြားနားမှု (ပုံသဏ္ဍန်လဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ အရောင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ အလင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်) တွေကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒီအကြံပေးချက်တွေက technically ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုရိုက်ရမယ်လို့တော့ ပြောပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ ဓါတ်ပုံသမားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်ပုံနဲ့ အပြုအမူ အလေ့အကျင့်ကို တိုးတက်စေမယ့် အကြံပေးချက်လေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပညာကို လေ့လာကာစ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
Credit to >> Ko Aung Ko Ko (Vanko)´s Blog
Posted by Alex Aung at 11:36 AM No comments:
၁။ ဆရာခင်ဗျ တခုလောက်သိချင်ပါတယ်ဗျာ။ အရိုး tv ရေဂါက အကြောဖြေ နိပ်လို့ရပါလားဗျာ။
TB ဖြစ်။ TV မဟုတ်။ နှိပ်နည်းကို ဆရာဝန်တွေ မသုံး။ ဖြစ်တဲ့သူ ယောက်ျားလို့ထင်ရ။ အသက် မသိ။ ဆေးစစ်ချက် မသိ။ ဘာတွေခံစာနေရ မသိ။
၂။ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်တယောက်က အင်္ဂလိပ်လိုရေးမေးတယ်။ တီဘီဆရာဝန်နဲ့ အရိုးအထူးကုဆရာဝန်တွေ ပြနေရတဲ့ရောဂါ။ တီဘီဆေး ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကြောင့် ဆေးပတ်လည်အောင်မသောက်ခဲ့တာ၊ အခုဆေးယဉ်တီဘီ ဖြစ်နေသလားစိုးရိမ်တာ စသဖြင့်ရေးပါတယ်။
အရိုးတီဘီ လက္ခဏာက ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ကျွန်တော့် ညီတစ်ယောက် မနှစ်က (2012) cat2ပြီးခဲ့တာ အခု ကိုယ်အလေးချိန်ကျ၊ နေ့ခင်း ညနေ/ည တငွေ့ငွေ့အပူချိန်တက် (ရက်ဆက်မဟုတ်)၊ နည်းနည်း ပြင်းပြင်း ထန်ထန်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရင် ချောင်းဆိုးတယ်၊ နည်းနည်းမော၊ ခါးနာ (တခါတရံ)၊ ဆေးခန်းပြတော့ x-ray မှာလည်း နဂို spots ထက် increase ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆရာ။ genexpert နဲ့ သလိပ်စစ်ပြီး အဖြေသိရမှ ဆေးယဉ်ပါး ဟုတ်မဟုတ် သိရမယ်တဲ့။ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်နေတာက သူဘယ်လိုကြိုးစားပြီး ထုတ်ထုတ်သလိပ်မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် သလိပ်အဖြေရမှ ဆေးယဉ်ပါး ဟုတ်မဟုတ်သိရပြီး ဆေးကုရမယ်ဆိုရင် အကယ်၍ သူသလိပ်လုံးဝမထွက်ခဲ့လို့ genexpert နဲ့ စစ်ဆေးလို့မရလို့ ကျိန်းသေတဲ့ အဖြေတစ်ခုမရခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှ ဆေးကုသခွင့် မရတော့ဘူးလားဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဆရာ။
ဆရာဝန်ကတော့ သူ့ကို ဆေးကိုဝယ်သောက်နိုင်ရင် ဝယ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးဖိုးက ပျှမ်းမျှ တစ်နေ့ (၉ဝဝဝ ကျပ်) ဝန်းကျင် (၂) နှစ်လောက် သောက်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (၃ဝဝဝ) ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကို ဆေးခန်းက ဆရာဝန်က လှူမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သာမာန်လူတန်းစားအနေနဲ့ ဝယ်သောက်ဖို့ဆိုတာ နှစ်နဲ့ချီနေတာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ သလိပ်ထွက်ပြီး genexpert နဲ့စစ်ရလို့ ယဉ်ပါးပိုးရှိတဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေရမှသာ လွဲစာနဲ့အတူ ဒေသန္တရကျန်းမာရေးကနေပြီး အခမဲ့ဆေးထုတ်ယူလို့ရမယ် ပြောလို့ပါ။ အခုသူက ဝယ်သောက်လို့လည်း မတတ်နိုင်၊ အခမဲ့ထုတ်ဖို့ကျတော့လည်း genexpert နဲ့စစ်ဖို့ သလိပ်က မထွက်လို့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေမရလို့ (လွဲစာ) ကမရ အဲဒီ့လိုဖြစ်နေလို့ပါ။ တော်တော် စိတ်ဓါတ်ကျနေပါတယ်။ စိတ်ရော လူရော ချုံးနေပါတယ်။ သူမှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးငယ်လေးကလည်းရှိတယ်။ သူ့မှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ဒီအတိုင်းကြီးကို ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ရောဂါပိုဆိုးလာမဲ့အထိ စောင့်နေရသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ သူကတော့ အရမ်းကို ကုသမှုခံယူချင်နေပါတယ်။
အရိုးတီဘီကို Pott disease လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
• X-rays ဓါတ်မှန်နဲ့ ရောဂါနာမည်တပ်ရမယ်။ ဓါတ်မှန်ထဲမှာ အရိုးမဟုတ်တဲ့ တစ်ရှူးတွေ ရောင်နေမယ်။ အဆစ်ကျဉ်းနေမယ်။ အရိုးထဲမှာ အိတ်လေးတွေလိုတွေ့မယ်။ ခါးရိုးဆိုရင် အရိုးအထက်အောက် အတိုင်းတား နည်းနေမယ်။
• Bone scans စကင်လဲလုပ်နိုင်တယ်။ တခါတလေ အဆစ်ထဲကအရည်ကို စုပ်ထုတ်ပြီး စစ်တာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ Biopsy လဲလိုရင်လုပ်မယ်။ သွေးစစ်ရင် ESR မြင့်နေမယ်။ အရိုးတီဘီက သူများကို မကူးစေပါ။
• တီဘီဆေးတွေနဲ့ဘဲကုသရတယ်။ ဈေးလဲ မကြီးပါ။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် မတူပါ။ ၆ လကနေ ၁ နှစ်အထိကြာနိုင်တယ်။
• Isoniazid, Rifampin နဲ့ Ethambutolဆေး ၃ မျိုးကို ပေးလေ့ရှိတယ်။ ၆ လကနေ ၉ လ အများဆုံးပေးတယ်။ ဆေးကိုတော့ မှန်မှန်သောက်ရမယ်။
• အနာသက်သာဆေးတွေနဲ့ အရောင်ကျဆေးတွေလဲ ပေးမယ်။ ဗီတာမင်လဲ ပေးမယ်။ နာတဲ့နေရာကို အပူကပ်တာ၊ အအေးကပ်တာလုပ်နိုင်တယ်။ အစာဟာရ ပြည့်ဝ-မမျှတအောင် စားသုံးရမယ်။
• ခါးရိုးမှာ ပြည်တည်လို့ ခွဲထုတ်ရတာလဲ ရှိတတ်တယ်။
• Disseminated bone tuberculosis အရိုးတွေတခုမက တီဘီဖြစ်တာရှားတယ်။ ၅% သာရှိတယ်။ HIV ပိုးပါ ရှိနေရင်တော့ အကုရခက်တယ်။
စစ်ဆေးမှုတွေကနေ INH နဲ့ RMP ဆေးတွေကို ယဉ်နေတာသေချာရင်၊ အောက်ကဆေးတွေကို အစဉ်အလိုက် ရွေးပြီး ၅ မျိုးတွဲပေးတယ်။
1. Aminoglycoside (Amikacin, Kanamycin) ဒါမှမဟုတ် Polypeptide (Capreomycin)
4. Fluoroquinolone (Moxifloxacin)
7. Thioamide (Prothionamide or Ethionamide)
9. Macrolide (Clarithromycin)
11. INH high-dose
3. Infertility and TB တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
4. Intestinal Tuberculosis အူ (တီဘီ) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/intestinal-tuberculosis.html
5. MDR TB Q and A ဆေးယဉ်တဲ့တီဘီ အမေး-အဖြေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/mdr-tb-q-and.html
6. MDR-TB ဆေးယဉ်တဲ့ တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/11/mdr-tb.html
7. Primary Complex ကလေးတီဘီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/primary-complex.html
8. TB (Tuberculosis) တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2008/10/tuberculosis-tb.html
9. TB Medicines Side Effects (တီဘီ) ဆေးတွေ နဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
10. TB No more in Medical Curriculum ဆရာဝန်တွေကို တီဘီ သင်မပေးကြတော့တာ စိုးရိမ်စရာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/10/tb-no-more-in-medical-curriculum.html
13. TB အသစ်လား အဟောင်းလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/tb.html
14. Tuberculin test (တီဘီ) အတွက် (ကြူဘာကူလင် တက်စ်)http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html
Credit: Dr.တင့်ဆွေရဲ့ Page
Labels: Health, Q&A, ဆောင်းပါး
ထိုင်းဆန်ခေါက်ဆွဲကြော် (၂ ယောက်စာ)
ဒီနည်းက ဖတ်ထိုင်းကြော်နည်းအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံး ကြော်ပေးထားပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတချို့ ရှာမရတာကြောင့် ဖတ်ထိုင်းလို့တော့ နာမည်မတပ်ပါရစေနဲ့။ အနီးစပ်ဆုံး အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြော်စားနိုင်မယ့်နည်းကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိုးက ကျွန်တော့်လို အစားသရဲဆိုရင် ၂ ယောက်စာ ဆိုပေမယ့် ပုံမှန်စားသူ ဆို ၃ - ၄ ယောက်စာရပါတယ်။
- ထိုင်းငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
- ပဲငံပြာရည်အကြည် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
- ပဲငံပြာရည်အနောက် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
- အနှစ်တိုက်ပြီး မန်ကျည်းမှည့် - ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
- သကြားညို - ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
- ခရုဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
- ရေနွေး - ကော်ဖီခွက် ၁ ခွက်စာ (၁၅၀ မီလီလီတာ)
(ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ အားလုံးရောပြီး သမအောင်မွှေ ထားပေးပါ)
- ကြက်ဥ - ၂ လုံး
- ဝက်အူချောင်း - ၂ ချောင်း
- ပဲပြား - ၁ တုံး
- ကြက်သွန်နီစဉ်းပြီး - ၂ လုံး
- ကြက်သွန်ဖြူစဉ်းပြီး - ၄ မြွှာ
- ကွေတီယိုဆန်ခေါက်ဆွဲ - ၂၀ဝ ဂရမ်
(ခေါက်ဆွဲများ မြုပ်အောင် ရေစိမ်ထားပါ)
- လှီးဖြတ်ပြီး မုန်ညင်း - ၅ ပင်
- ပဲပင်ပေါက် - အနည်းငယ်
- ကြက်သွန်မြိတ်ဖြတ်ပြီး - ၃ ပင်
၁။ ဆီအိုးအပူပေးကာ ပဲပြားများ သေးသေးတုံးကြော်ပြီး ဖယ်ထားပါ။ ကြက်ဥများကို ဖောက်ထည့်ပြီး အကာများ ခဲလာသည်အထိ စောင့်ပေးပြီး ခြေကြော်ပါ။ ပြီးလျှင် ဖယ်ထားပါ။
၂။ ဆက်၍ ဝက်အူချောင်းအနေတော်လေးများ တစ်စောင်း လှီးဖြတ်ကာ အရောင်ပြောင်းရုံကြော်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီစဉ်းပြီးသားများထည့်၍ အနည်းငယ်ခြောက်လာသည်အထိ ဆီသတ်ပါ။
၃။ ခေါက်ဆွဲများထည့်ပြီး သေသေချာချာ မွှေပေးပါ။ ပဲပြား ကြော်ပြီးသားများ ထည့်ပေးပါ။ ခေါက်ဆွဲများ ပျော့လာ လျှင် အသင့်စပ်ပြီးသော ဆော့စ်များမှ ထမင်းစားဇွန်း ၆ ဇွန်းထည့်ပေးပါ။ (ဆော့စ်အကျန်များကို ဘူးတစ်ခုနှင့် ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းနိုင်ပါတယ်။) သေသေချာချာ နှံ့စပ်အောင်မွှေပေးပါ။ အရမ်းခြောက်လွန်းလျှင် ရေနွေးနည်းနည်းစီဖျန်းပြီး ကြော်ပေးပါ။
၄။ မုန်ညင်းရွက်များ ထည့်မွှေပေးပါ။ အရွက်များပျော့လာလျှင် ပဲပင်ပေါက်များထည့်ကြော်ပြီး ဖယ်ထားသော ကြက်ဥ အကြေများ ထည့်ပေး၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူမှုန့်ဖြူးကာ ကြက်သွန်မြိတ်ထည့်မွှေပေးပြီး အဆုံးသတ်နိုင်ပါပြီ။
ကွေ့ တီယိုကတော့ လူကြိုက်များတဲ့ ခေါက်ဆွဲတမျိုးပါပဲ။ ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူသလို စားလို့ လဲကောင်းပါတယ်။ ထိုင်းဆိုင်တွေမှာ သွားစားရင် ကွေ့ တီယိုကို ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ခေါက်ဆွဲဖတ်နဲ့ စားလို့ ရပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (၈ ပွဲစာ)
၁။ ကြက်ရိုး - ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင်
၂။ ကွေ့ တီယိုဆန်ခေါက်ဆွဲဖတ် (သို့ ) ဆန်ပြား (သို့ ) ကြာဇံ - ၅၀ ကျပ်သား (သို့ ) ၂ ပေါင်
၃။ ငါးဖယ်လုံး - ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင်
၄။ ၀က်သား (သုို့ ) ကြက်သား - ၄၀ သား (သုို့ ) ၁ ပေါင်ခွဲ
၅။ တောက်တောက်စဉ်းထားသော ၀က်သား (သို့ ) ကြက်သား - ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင်
၆။ ပဲပင်ပေါက် - ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင်
၇။ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်မြိတ်
၈။ ပါးပါးလှီးထားသော နံနံပင်
၁၀။ နံနံပင်အရိုး - အခု ၂၀
၁၁။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မွှာ
၁၂။ ငရုတ်ကောင်းစေ့ - ၁၀ စေ့
၁၃။ ဆား - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း နှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်
၁၄။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ ကြက်ရိုးများကို သန့် စင်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓါးပြားရိုက်ထားပါ။ ၀က်သား (သို့ ) ကြက်သားကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
၂။ အိုးကြီးကြီးတလုံးထဲမှာ ရေ ၄ လီတာ ထည့်ရ်ျ ပွက်လာအောင်တည်ပါ။ ရေပွက်လာလျှင် နံနံပင်အရုိုး၊ ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ငရုတ်ကောင်းတို့ ကိုထည့်ပါ။ ၂ မိနစ်လောက်နေ အနံ့ မွှေးလာလျှင် သန့် စင်ထားသော ကြက်ရိုးများကိုထည့်ပါ။ ဆား ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း နှင့် သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းတို့ ကိုထည့်ပါ။ ထို နေ့ာက် မီးအေးအေးဖြင့် အနည်းဆုံး ၁ နာရီလောက်တည်ပါ။ ရေလျော့သွားတိုင်း ထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးပါ။
၃။ မကပ်သောဒယ်အိုးထဲကို တောက်တောက်စဉ်းထားသော ၀က်သား (သို့ ) ကြက်သား ကိုထည့်၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်ကိုထည့်ရ်ျ အသားများ ကျက်သွားသည်အထိ အိုးပေါ်မှာလှိမ့်ပါ။ အသားလေးတွေတခုနဲ့ တခုလုံးမသွားအောင် ခြေခြေပေးပါ။(ဆီမထည့်ပါ။ ခြောက်သွားအောင်လှိမ့်စရာမလိုပါ။ အသားကျက်သွားတာနဲ့ မီးဖိုပေါ်ကချပါ။)
၄။ စားခါနီးတွင် အိုးသေးသေးတလုံးထဲကို ပြုတ်ရည်အိုးထဲမှ တပွဲစာအတွက် ယောက်ချိုဇွန်း ၃ ဇွန်း ကိုယူရ်ျထည့်ပါ။ ငါးဖယ်လုံး ၄ လုံးကိုထည့်၊ ပါးပါးလှီးထားသော ဝက်သား (သို့ ) ကြက်သားကိုထည့် ရ်ျ ပွက်လာအောင်တည်ပါ။ ပွက်လာလျှင် ပဲပင်ပေါက်ကိုထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှချပါ။
၅။ ဆန်ခေါက်ဆွဲအဖတ်ကိုသုံးလျှင် အခြားအိုးတခုထဲမှာ ဆန်ခေါက်ဆွဲအဖတ်ကို အရင်ပြုတ်ပြီးမှ ပန်းကန်ထဲကို ခေါက်ဆွဲဖတ် အရင်ထည့်၊ အသားအကျေကိုထည့်၊ ပြီးလျှင် ဟင်းရည်ကို နှင့် ငါးဖယ်လုံး ၊ အသားမျာကိုအပေါ်ကလောင်းထည့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊နံနံပင်ထည့်၊ အပေါ်ဆုံးကနေ ကြက်သွန်ဖြူကြော်လေးဖြူးပြီး ပြုလုပ်ပါ။ (ကြက်သွန်ဖြူကြော်ကို ထည့်ဖြစ်အောင်ထည့်ပါ။ အနံ့ လေးမွှေးမွှေးလေးနဲ့ အလွန်အရသာရှိပါတယ်။)
၆။ ကွေ့ တီယို ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကို သကြား၊ ငရုတ်သီး အကြမ်းမှုန့် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းရှာလကာရည်ချဉ်တို့ နှင့် တွဲဖတ်ရ်ျသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ တချို့ ကတော့ မြေပဲထောင်းပါ ထည့်စားကြပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:17 PM No comments:
အရွက်နားလေးတွေ တွန့်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ခရက်စီဖားရပ်စ် (Cruciferous Vegetable)
Cruciferous Vegetable တွေက ကင်ဆာတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေကြောင့် လူအများက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပါတယ်။ Cruciferous Vegetable ဆိုတာက Brassica မျိုးနွယ်ဝင်အပင်တွေကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီး ပန်း ဂေါ်ဖီစိမ်း (Broccoli)၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဂေါ်ဖီပင်ပေါက်၊ ကိုက်လန်၊ တရုတ်မုန်ညင်း၊ ဝါဆာဘီ၊ မုန်လာဥဖြူ၊ တာအိုးရွက်၊ သင်္ဘောဒန့်သလွန်၊ တရုတ်မုန်လာ၊ တောင်ကြာကလေးပင်စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေပါဝင်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရွက်အနားလေးတွေတွန့်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်း ရွက်တွေဆိုပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ Cruciferous Vegetable တွေက ဗီတာမင် C၊ E၊ K၊ ဖော်လိတ်နဲ့ တခြားသတ္တုဓာတ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်ပြီး အမျှင်ဓာတ်လည်းကြွယ်ဝကြပါတယ်။ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့နဲ့ ခါးသက်သက်အရသာကိုဖြစ်စေတဲ့ ဆာလဖာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးကြွယ်ဝတာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိစေသော အဆိပ်အတောက်တွေကို အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အဆိပ်ပြေစေခြင်းနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတို့ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုတွေအရ ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ကင်ဆာရောဂါပထမ အဆင့်နဲ့ ဒုတိယအဆင့်လောက်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်က ကင်ဆာရောဂါကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီက ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း (Broccoli) က ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဂေါ်ဖီပင်ပေါက်က ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပြင်ဆင်နေချိန်၊ စားသုံးနေချိန်နဲ့ အစာချေဖျက်နေချိန်မှာ ဃမကခင်နမသကျ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ (Glucosinolates) ဆာလဖာ ပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်း ပြိုကွဲပြီးတော့ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Indoles နဲ့ Isothiocyanates လိုမျိုး ဇီဝဓာတ်ပေါင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များကို လေ့လာချက်တွေနဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ဆဲလ်တွေမွေးမြူပြီး လေ့လာချက်တွေနဲ့အတူ ဒီဓာတ်ပေါင်းတွေက ကင်ဆာရောဂါတားဆီးနိုင်ခြင်းကို သက်သေပြထားပါတယ်။
Indoles နဲ့ Isothiocyanates ဇီဝဓာတ်ပေါင်း တွေက အိမ်ကြွက်တွေ၊ လယ်ကြွက်တွေရဲ့အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နဲ့ အစာအိမ်အပါအဝင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေရဲ့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
Isothiocyanates ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အမြား စားသုံးသူတွေက ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅ ကြိမ်အထက်စားသုံးသူ အမျိုးသမီးတွေက အဆုတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ဟင်းသီးဟင်း ရွက်တွေက မတူညီတဲ့အာနိသင်တွေရှိတာကြောင့် လူတိုင်း တစ်နေ့ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးစီ မတူညီအောင် စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အစိမ်းရင့်ရောင်၊ အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ပဲ၊ ကစီဓာတ်များတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဆိုပြီး အုပ်စု ၅ ခုခွဲခြားထားပါတယ်။
Isothiocyanates ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက အစိမ်းရင့်ရောင်ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေနဲ့ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက် အုပ်စုတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက DNA ပျက်စီးခြင်းမှ ဆဲလ်တွေကို ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ တစ်ရှူးတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မဝင်ရောက်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ ဗက်တီးရီးယား ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှု တွေကို လျှော့ချပေးတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပါတယ်။ ဆဲလ်တွေသေဆုံးမှုကို လျှော့ချပေးတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ် (အကျိတ်)တွေ ဘေးကို ပျံ့နှံ့ခြင်းနဲ့ သွေးကြောအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါအပါအဝင် ရောဂါအမျိုး ၅၀ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးကြောတွေ ပိတ်ဆို့မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွေးတွင်း ဖိအားကို ကျစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ ကျန်းမာနေတဲ့ အခြေအနေမှ ကင်ဆာရောဂါအခြေအနေဘက်သို့ ပြောင်းသွားခြင်းကို တားဆီးပေးပါ တယ်။ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စရောတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
Credit : Food Magazine (Myanmar)